I Melkizedeka na Melkisedeka na Melkitsedeka dia mpanjaka mpisorona resahina ao amin'ny Testamenta Taloha. Ao amin’ny fitantaran'ny Baiboly dia nihaona tamin'i Abrahama i Melkizedeka rehefa niverina avy any amin'ny ady nifanaovany tamin'ireo mpanjaka tany Mesôpôtamia (na Mezôpôtamia) i Abrahama. Nanome mofo sy divay an'i Abrahama izy ka ho setrin'iezany dia nomen'i Abrahama ny ampahafolon’ny zavatra voababo izy.
Ny habetsahan'ny zava-tsy fantatra momba an'i Melkizedeka no niteraka ireo fikarohana sy tombantombana maro momba azy nandritra ny taonjato maro, tao amin'ny endriky fivavahan'ny Israelita taloha aloha (jereo: iahvisma), avy eo tao amin’ny jodaisma (ao amin’ny Salamo faha-110 dia heverina ho toy ny tandindon’ny Mesia izy. ) ary tao amin’ny kristianisma taty aoriana (araka ny manampahaizana kristiana sasany dia tandindon'ny eokaristia na fanasan’ny Tompo ny fanomezan'i Melkizedeka mofo sy divay an'i Abrahama). Ny Epistily ho an’ny Hebreo ao amin’ny Testamenta Vaovao dia manao tonon-tsiahy ny Testamenta Taloha mba hanehoana fa tandindon'i Kristy i Melkizedeka.
2 I Melkizedeka amin'ny Jodaisma
2.3 Ao amin'ny boky apokrifa
3 I Melkizedeka amin'ny kristianisma
3.2 Araka ny Rain'ny Fingonana
Raha ny fiforonan-teny no heverina, ny teny hebreo hoe melek dia midika hoe "mpanjaka" ary ny hoe zedek dia midika hoe "fahamarinana". Amin'ny teny hebreo dia atao hoe מַלְכֵּי־צֶדֶק / Malkî-ṣedeq, izay midika hoe "mpanjakan’ny fahamarinana" ny anaran'i Melkizedeka. Lazaina fa mpanjakan'i Salema sy mpisoron'ny Avo Indrindra (hebreo: El-Elyôn) izy. Ao amin'ny Epistily ho an’ny Hebreo i Kristy dia atao hoe "Mpisoron-dehibe mandrakizay" sahala amin’i Melkizedeka.
I Filo avy any Aleksandria sy i Josefa, izy samy mpahay tantara jiosy, dia mandika amin'ny teny grika ny hoe Melkizedeka amin’ny hoe Basileus dikaios.
I Melkizedeka amin'ny JodaismaHanova
Ny anarana hoe Melkizedeka dia miseho indroa ao amin'ny Testamenta Taloha. Ny voalohany dia ao amin'ny Bokin'ny Genesisy na Jenezy: "Ary Melkizedeka, mpanjakan'i Salema, nivoaka nitondra mofo sy divay; ary izy dia mpisoron' Andriamanitra Avo Indrindra." (Gen/Jen. 14.18). Ny tanàna antsoina hoe Salema eto, araka ny Bokin'ny Salamo ("Naoriny ao Salema ny tranolainy, ary any Ziona ny fonenany." Sal. 76.2), dia tsy iza fa i Jerosalema.
Ny teny hoe El sy Elyon izay natambatra mba ho enti-manondro ilay andriamanitra avo indrindra atao hoe El, dia hita koa ao amin’ireo lahatsoratra tranainy tao amin’ny tany Atsinanana taloha, tany Foinikia (na Fenisia) sy tao amin'ny vondrom-pianakavian’ andriamanitra tao Ogarita, izay niantsoana manokana andriamanitra roa.
Ny lahatsoratra ao amin'ny Bokin'ny Genesisy, izay tsy tena fantatra loharano niaviana, dia miresaka voalohany an'i Melkizedeka aorian'ny fandresen'i Abrahama ireo mpanjaka roa niady taminy. Mba hamaliany ny tsodrano nataon'ny mpanjakan'i Salema azy dia nandoa ampahafolon-karena taminy izy ("Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Dia nomen'i Abrama azy ny ampahafolon'ny zavatra rehetra." Gen/Jen. 14.20). Fanekena ny fahefan'io mpanjaka io ara-pôlitika sy ara-pivavahana angamba izany, izay lasa zon'ny mpanjakaan'i Israely, dia i Davida sy ny mpanjaka hafa nandimby azy, tao Jerosalema, renivohitry ny Jebosita (na Jebosiana) taloha.
Mety ho fomba enti-miady amin'ny fandavan'ny vahoaka hebreo sasany ny fisian'ny mpanjakan'i Jerosalema izay fahefana afaka mampandoa hetra amin'ny tanin'ny Israelita, izay mihevitra ny maha avy amin' Andriamanitra ny fitondran'ny Patriarka sy ny fandaminana ara-poko izay tsy tiany hialana. Ny fanapahan-kevitr'i Abrahama izay nandoa nyy ampahafolon'ny fafanany rehetra tamin'i Melkizedeka dia heverina ho fototra tsy azo lavina momba ny fandoavana ampahafolon-karena.
Hita koa ny anarana hoe Melkizedeka ao amin’ny Bokin’ny Salamo hanomezam-boninahitra mpanjaka jiosy iray izay misy mihevitra fa mpisoron-dehibe koa, araka izao: "Efa nianiana Jehovah ka tsy hanenina: Hianao no Mpisorona mandrakizay Araka ny fanaon'i Melkizedeka." (Sal. 109/110.4).
Aaraka ny literatiora rabinikaHanova
Taty aoriana, hatramin'ny nitrangan'ny kristolojia kristiana dia nanao izay hiheverana an'i Melkizedeka ho Jiosy na fara-hafakeliny ho iray amin'ireo Patriarka ny literatioran'ny raby. Araka ny fanaovana fivoasana nataon'ny raby toa an'i Rachi dia i Sema rain'ny Semita sady zanak'i Noa (na Nôe) io Melkizedeka io. I Sema mantsy lazaina fa niaina nandritra ny 610 taona ka tokony ho nifankahita tamin'i Abrahama.
Ny lovantsofina sasany dia nanao an'i Melkizedeka ho ny arkanjely Mikaela (na Misely). Manoloana ny famakafakana lahatsoratra kristiana izay miainga mazava amin’ny andalana ao amin’ny Epistily ho an'ny Hebreo (na Epistolà ho an'ny Hebrio), ny raby dia niova fomba fijery tanteraka: i Abrahama no nomem-boninahitra noho ny nihaonany tamin'i Melkizedeka; ny lahatsoratra sasany dia milaza fa ny mpanjakan'i Salema izay naongana dia namindra ny asam-pisoronany tamin'io patriarka io.
Ao amin'ny boky apokrifaHanova
Hita koa io anarana io ao amin’ireo boky tsy voaray ho kanônan'ny Baiboly. Ireo lahatsoratra ivelan'ny literatiora kanonika dia manome toerana lehibe an'i Melkizedeka sy ny anjara asany. Ao amin'ny Bokin'i Henoka slava dia lazaina fa naterak'i Sofonima vadin'i Nira rahalahin'i Noa (na Noe) i Melkizedeka.
I Melkizedeka amin'ny kristianismaHanova
Araka ny Testamenta VaovaoHanova
Ny Epistily ho an'ny Hebreo ao amin'ny toko faha-7 dia manome lanjany lehibe an'i Melkizedeka, "izay tsy manan-dray, tsy manan-dreny, tsy manan-tetiarana, izay tsy manam-piandohana sy fiafarana ny androny". Ny mpanoratra ny Epistily ho an'ny Hebreo no voalohany (tamin'ny fianteherany amin'ny Genesisy 14) nametraka fampitahana an'i Jesoa amin'i Melkizedeka: ny asam-pisoronan'i Melkizedeka dia tandindona tsy tongalafatry ny fanompoam-pivavahana ambony izay mametraka an'i Jesoa ho mpisoron-dehibe fanaperana. Noho izany dia lasa "tandindona" ho an'i Kristy i Melkizedeka.
Hatramin’ny voalohany ny Kristiana dia efa liana ny amin'ny Salamo faha-60 (izay notononin'i Jesosy, araka ireo evenjely. Ireto misy ohatra vitsy. Ao amin'ny Evanjelin'i Marka dia izao no voasoratra: "36 Kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny Fanahy Masina hoe: Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko hoe: Mipetraha eo an-tanako ankavanana Ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. 37 Ny tenan'i Davida manao Azy hoe Tompo, koa ahoana no maha-Zanany Azy? Ary ny vahoaka betsaka nihaino Azy tamin'ny hafaliana." (Marka 12. 36-37), izany dia midika fa i Kristy no "Zanak'i Davida" amin'ny heviny mahakasika loatra ny fanindrahindran-tanindrazana.
Araka ny Rain'ny FingonanaHanova
Ny lovatsofina navelan'ireo Rain’ny Fiangonana (na Aban'ny Eglizy) dia nitrandraka ny fanaovana famakafakana ara-tsarinteny (frantsay: exégèse allégorique) momba ilay andalan-dahatsoratra ao amin'ny Epistily ho an'ny Hebreo, ka nanampy singa vaovao hafa. Nanomboka tamin'i Kipriano dia noheverina fa fanaovan-tsorona marina tokoa izay tandindona mialoha ny Eokaristia (na fanasan'ny Tompo) ny fitantarana momba an'i Salema. Ity fivoasana ity dia nankasitrahan’ny maro nandritra ny fotoana maharitra noho ny fampidirana azy tao amin'ny kanônan'ny lamesa rômana. Ireo Aban'ny Eglizy toa an'i Ambrosio ohatra, dia nihevitra fa niseho amin'ny alalan'i Melkizedeka ny Zanak'Andriamanitra tenany, izay ataon'ny mpanoratra maro hafa fa ny Fanahy Masina.
Noho ny fanomezan-danja tafahoatra an'i Melkizedeka dia nisy fotoana niadian'ny Rain'ny Fiangonana amin'ny sekta melkizedekiana, izay nanandratra amim-boninahirta an'i Melkizedeka ka ihevitra azy ho hery avy any an-danitra izay lehibe noho i Kristy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Melkizedeka&oldid=980547"
Dernière modification le 2 Martsa 2020, à 06:07